Ilaalinta Dhaqaalaha: Dib u soo celinta dhoofinta Shiinaha ee bishii Abriil iyada oo la xakameynayo COVID-19
BEIJING, May 7 (Xinhua) - Dhoofinta alaabooyinka Shiinaha ee dib loo soo celiyay bishii Abriil, ayaa ku dartay calaamado muujinaya in ganacsiga dibedda ee waddanku uu xasilinayo iyada oo ay jirto xaddid dheeraad ah ee COVID-19.
Dhoofinta dalka ayaa kor u kacday boqolkiiba 8.2 sanadkii sanadkii ilaa 1.41 tiriliyan yuan (qiyaastii 198.8 bilyan oo doolarka Mareykanka ah) bishii Abriil, marka la barbar dhigo hoos udhaca 11.4-boqolkiiba rubucii ugu horreeyay, ayuu yiri Maamulka Guud ee Kastamyada (GAC).
Soo dhoofinta ayaa 10.2 boqolkiiba hoos u dhacday 1.09 tiriliyan yuan bishii la soo dhaafay, taas oo dhalisay isugeyn ganacsi oo ah 318.15 bilyan yuan.
Ganacsiga shisheeye ee alaabada ayaa hoos udhacay 0.7 boqolkiiba sanadka sanadka ee Abriil ilaa 2.5 tiriliyan yuan, oo ka yaraanaya hoos u dhac 6.4-boqolkiiba Q1.
Afartii bilood ee ugu horreysay, ganacsiga ajnabiga ah ee alaabada ayaa celcelis ahaan 9.07 tiriliyan yuan, hoos uga dhacay 4.9 boqolkiiba sanadkii sanadkii.
Dib u soo celinta dhoofinta ayaa muujisay adkeysiga adag ee dhaqaalaha Shiinaha iyo baahida adag ee dibadda ah ee soo saarista alaabada Shiinaha laga soo saaray, ayuu yiri Zhuang Rui, oo ah kuxigeenka Machadka Dhaqaalaha Caalamiga ah ee Jaamacadda Ganacsiga iyo Dhaqaalaha ee Jaamacadda.
Ganacsiga dibedda ee waddanka ayaa xoog ku qabsaday COVID-19 iyada oo warshadihii la xidhey oo amarkii shisheeyena hoos u dhacay.
Iyagoo xiraya isbeddelka, ganacsiga Shiinaha ee ASEAN iyo waddamada ku teedsan Belt iyo Waddadu waxay adkeysteen kobaca joogtada ah.
Intii lagu jiray muddadii u dhexaysay bilihii 1aad-4aad, ASEAN waxay sii haysatay iskaashiga ganacsi ee ugu weyn Shiinaha iyada oo ay kor u qaadday 5.7 boqolkiiba sanadka sanadkii ilaa 1.35 tiriliyan yuan, taas oo ka dhigan 14.9 boqolkiiba wadarta guud ee ganacsiga Shiinaha.
Ganacsiga isku-darka ah ee waddammada isku xidha Belt iyo Road ayaa kor u kacay 0.9 boqolkiiba illaa 2.76 tiriliyan yuan, oo ah 30.4 boqolkiiba wadarta guud, oo ah korodh 1.7 boqolkiiba dhibcaha sanadkii sanadkii.
Soo dejinta iyo dhoofinta alaabada Midowga Yurub, Mareykanka iyo Japan ayaa yaraaday muddadan, xogta GAC ​​ayaa muujisay.
Shirkadaha gaarka loo leeyahay ayaa ahaa ka qayb qaadashada ugu weyn ee ganacsiga Shiinaha ee afarta bilood ee ugu horreeya, iyadoo mugga ganacsigiisa dibadda uu ku kordhayay boqolkiiba 0,5 illaa 3.92 tiriliyan yuan.
Shiinaha ayaa soo saaray siyaasado dhowr ah oo ka caawinaya shirkadaha ganacsiga shisheeye inay dib u bilaabaan soosaarka iyada oo ay jirto xaddiga sii kordhaya ee COVID-19.
Dhiirrigelinno ayaa la soo saaray si ay u dhinto qiimaha shirkadaha ayna ka caawiso sidii ay u heli lahaayeen amaahda ka jaban, iyada oo hanaanka maamul ee kastamyada loo sii qorsheeyay si loo dhiirrigeliyo dhoofinta iyo soo dejinta.
Adeegyada tareenka xamuulka qaada ee Shiinaha iyo Yurub waxay noqdeen marin muhiim ah oo loo adeegsado saadka si loo hubiyo ganacsi habsami leh maaddaama gaadiidka cirka, badda iyo wadooyinka ay si ba'an u saameeyeen cudurka.
Laga bilaabo Janaayo ilaa Abriil, wadar ahaan 2,920 tareennada xamuulka qaada ee xamuulka qaada ee Shiinaha iyo Yurub ayaa xamuul xamuul ah oo dhan 262,000 TEUs (cutubyo u dhigma 20-እግር), boqolkiiba 24 iyo 27 boqolkiiba sanad ka hor, siday u kala horreeyaan.
Isagoo ogaysiinaya in cudurka faafa uu keenay kalsooni darro baahsan oo dhanka ganacsiga ah, Ni Yuefeng, madaxa GAC, wuxuu sheegay in wadanku uu sii balaarin doono xirmada siyaasadiisa si looga hortago saameynta COVID-19 isla markaana kor loogu qaado koboca daganaanshaha muddada dheer ee ganacsiga shisheeye.
Xigasho: Xinhua Net